Woman Fighting for Her Daughter’s Future (April 20/2021) – PVTV Myanmar
Radio NUG – Jan 27th, 2022 Morning
တေးရေး ကို Ray၊ တေးဆို မင်းမြတ်ရဲ့ “တော်လှန်နေဆဲ” ဆိုတဲ့ သီချင်းကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Radio NUG – Jan 26th, 2022 Evening
Radio NUG – Jan 26th, 2022 Morning
Radio NUG – Jan 25th, 2022 Evening
Radio NUG – Jan 25th, 2022 Morning
Radio NUG – Jan 24th, 2022 Morning
Radio NUG – 22nd Jan, 2022 Evening
Radio NUG – Jan 22nd, 2022 Morning
The State of Play in Myanmar
Woman Fighting for Her Daughter’s Future (April 20/2021)
·9months ago ·1 Comment
(၂၆-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့ ထုတ်လွှင့်မှုကဏ္ဍများ…
A PyayZin ရဲ့ Civil Disobedience ဆိုတဲ့ အနုပညာတင်ဆက်မှု
Radio NUG – Dec 24th, 2021 Morning
William Read says:
2021-08-08 at 8:06 AM
😀 Nice work pal. I’d recommend checking out PromoSM.! ! You could use it to grow your channel!
Subscribe 91,000 Subscribers
တိုက်ပွဲမဖြစ်ဖို့ တရုတ်က ပြောပေမယ့်လည်း လက်ရှိအနေအထားက တိုက်ပွဲတွေ ရပ်တန့်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ကေအိုင်အိုပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံပြော
ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက် စစ်ပွဲသတင်းများ စုစည်ဖော်ပြမှု
ဒီလိုပဲဖစ်ရမယ်.. ချိနကို ဘာမှ အရေးလုပ်နေစရာမလိုဘူး.. ဒါ ငါတို့ ပြည်တွင်းရေး
ခ် ခ် ေပါက္ေဖာ္စကားနားေထာင္ရေအာင္ ေပါက္ေဖာ္ကပေထြးမို႔လား
Yar Yar Yamin
အိပ်မက်တစ်ခုအကြောင်း။ မင်းအောင်လှိုင် သည် ပြုံးပြီး လက်ဝှေ့ယမ်းပြနေသည်။ ပြည်သူလူထုကြီးကလည်း "ဘဘဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ" ဆိုပြီး စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ...
Spring Revolution (April 20/2021)